Ahoana ny fanidiana mikendry ny tanjona 10 + amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso fakan-tsary radar? -Tantara ara-teknika-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Ahoana ny fanidiana mikendry ny tanjona 10 + amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso fakan-tsary radar?
Fotoana: 2020-01-14 Hits: 24
Re matetika fa ny mpiady dia voahidy amin'ny radar amin'ny vaovao sy fahita lavitra. Raha mbola voahidy amin'ny radara ny mpiady, dia hanidy ny mpiady ny mpiady arakaraka ny fampahalalana nomen'ny radar mihidy, izay midika fa rehefa hita dia tsy azo atao mihitsy ny mandositra. Inona no karazana traikefa mety hitranga raha ampiharina amin'ny faritra fiarovana ny teknolojia radara mba hanidiana ny tanjona kendrenao? Tsy ho afaka handositra ve izany aorian'ny fanidiana? Inona no karazana teknolojia ity?
Fitsipika kendrena amin'ny tanjona amin'ny radara
● Fitsipika fandrefesana elanelana radara
Ny fambara ampitaina amin'ny antena mamindra radar dia mamakivaky ny habakabaka mankany amin'ny teboka kendrena, ary avy eo dia taratra avy amin'ny kendrena mankany amin'ny radena mandray antena. Ny fahatarana amin'ny fotoana fampielezana azy dia ny halaviran'ny kendrena, dia ny hafainganam-pandehan'ny onja elektromagnetika eny amin'ny habakabaka aorian'ny fampifangaroana ny signal voaray, dia azo atao ny manome fambara matetika iray. Ny fahaizany maneho ny fahita matetika dia, dia ny fantsom-pifandraisana, ny vanim-potoana fanovana hatetika, ny fanemorana ny fotoana () dia azo atao amin'ny fanombanana ny fahita matetika amin'ireo mari-pamantarana voaray.
● Fitsipika momba ny fandrefesana ny hafainganam-pandeha radar
Ny tanjona dia manana hafainganana hafainganam-pandeha, izay nahatonga ny fahita matetika Doppler. Ny dikany dia, izay ny kendrena mifandraika amin'ny hafainganam-pandeha radara, dia ny halavan'ny onja elektromagnetika. Ny faharetan'ny pulse tsirairay dia somary kely, ary ny elanelana misy eo amin'ny polipitra mifanila dia azo heverina ho tsy miova. Noho ny fisian'ny haavo Doppler kendrena dia misy fiovana voafaritra ny fatran'ny zana-tsokajy kendrena. Raha ny fitsipiky ny fanovana dia azo refesina ny refin'ny Doppler matetika, izay mahazo ny hafainganan'ny tanjony. ny sarintany an-tsary ireo akony kendrena 4 mifanila dia omena amin'ity sary manaraka ity.
● Fitsipika fandrefesana ny zoro radara
Raha ampitahaina amin'ny mari-pamantarana echo lasibatry ny singa 1 ao amin'ny antena array, ho an'ny kendrena lavitra (farana lavitra) iray, ny famantarana ny singa 2 dia manaparitaka halavirana lava kokoa. Satria ny halavirana dia kely kokoa noho ny halaviran'ny kendrena, izany dia mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny dingana misy eo amin'ireo famantarana voaray amin'ireo singa roa.
Ny halavan'ny lalan'ny mari-pamantarana voaray ao amin'ny singa 2 dia, izay no famantarana kendrena. Ny fotoana fampielezana takiana amin'ity halavany ity dia ， Ho an'ireo fantsom-peo tery (Ny fantsom-pifandraisana famantarana dia kely kokoa noho ny refin'ny signal), ny faharetan'ny fotoana ny fahita matetika dia mitovy amin'ny fahasamihafana amin'ny dingana. Ny zoro ny targetcan dia azo refesina amin'ny famahana ny elanelam-potoana misy eo amin'ireo singa roa.
Ahoana ny fomba fanakanan'ny NSR300WVF tanjona marobe miaraka?
Tanjona marobe no ho hita amin'ny faran'ny detection, ary ny fizarana ny tanjona dia mety hitranga tampoka, miaraka amin'ny halavirana samihafa. Misy tanjona miaraka amin'ny hafainganam-pandeha hafa amin'ny halavirana mitovy (toy ny T7 sy T8) ary ny tanjona kendrena misy zoro samy hafa amin'ny halavirana mitovy (toy ny T4 sy T5). Mandritra izany fotoana izany dia mety hiseho ny tanjona tsy marina amin'ny faran'ny detection. Izy io dia fahitana tokana, misy fahasamihafana eo amin'ny tena sandany sy ny habetsaky ny fahitana ny halavirana, ny hafainganana ary ny zoro kendrena, noho izany ny tena fampahalalana kendrena dia tsy azo alaina mivantana ho sandan'ny detection tokana.
Misy lesoka kely amin'ny famantarana, noho izany ilaina ny fanivanana milamina ny fampahalalana lasibatra hita mba hanehoana ny tena làlan'ny lasibatra, ary mila tsaraina kokoa raha ny tena lasibatra no tena lasibatra na tsia. Noho izany, ny isan'ny tanjona tratra dia ho lehibe lavitra noho ny tanjona kendrena.
Aorian'ny fanodinana mari-pamantarana toy ny detection, mifanandrify ary ny sivana, ny làlana tena kendrena dia azo aseho eo amin'ny interface interface. Raha misy tanjona marobe amin'ny faritra fanaraha-maso radara, ny fahaizana manavaka ny kendrena samihafa dia azo tanterahina noho ny fahasamihafana amin'ny halavirana, haingam-pandeha na angona fampahalalana eo anelanelan'ny tanjona, ary ny radara dia afaka manara-maso izay kendrena manavaka azy amin'ny faritra iray manontolo. Noho ny fetran'ny famolavolana ny masontsivana sy ny fotoana fanaovana kajy ny fitaovana, dia hahena ny isan'ny radar kendrena ambony indrindra.
Ireo singa ao amin'ny rafitra Nanoradar NSR300WVF ：
● Radar:Radar 24GHz-ISM-Band an'ny maody maodely FMCW. Mamoaka andry elektromagnetika mavitrika amin'ny hafainganam-pandeha 8 heny isan-tsegondra izy, ary mahazo akony taratra avy amin'ny kendrena mba hahitana sy hahazoana vaovao toy ny azimuth sy ny halaviran'ny kendrena. Manohana hatramin'ny 32 kendrena ny fahitana sy ny fanarahan-dia miaraka. Mandritra izany fotoana izany, ny radara dia manohana ny fivoahan'ny syndrosa ≥10 kendrena, manome ny valiny fitiliana marina indrindra ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Amin'ny fampiasana algorithma manan-tsaina, afaka mianatra mavitrika izy io, ary mampifanaraka ny tontolo iainana mba hahalalana ny tanjona.
● PTZ Camera ： Araho amin'ny fotoana tena izy ny tanjona, ampio ny tanjona kendrena ary ataovy izay hampiakarana.
● Rindrambaiko fitantanana ：Fandehanana tsotra, fametrahana ny faritra fanairana, fizahana amin'ny fotoana tena izy, fandraisam-peo sy fiatoana playback; rafitra misokatra, tohano ny fanitarana miovaova amin'ny fomba tambajotra marobe; manomeza antontan'isa momba ny fanairana alain'ny mpampiasa, fampiratiana, antsipiriany fanairana, vahaolana mifanaraka amin'izany, sns
Endri-javatra rafitra an'ny Nanoradar NSR300WVF ：
● All Day&All Weather Protection：Fiarovana amin'ny fotoana tena izy 7 × 24h amin'ny toetrandro rehetra, azo ovaina amin'ny toetr'andro ratsy toy ny orana, lanezy, setroka, vovoka, setroka sns.
● Famaritana mavitrika, Fiarovana 3D ：hampiakatra fanairana ny radar ary hiteraka fanairana horonan-tsary hanidiana ny lasibatra amin'ny tena izy, handefa horonantsary fanairana ary hanombana ny foibe fanaraha-maso.
● Manan-tsaina, azo itokisana, tahan'ny fanairana sandoka ambany ：mbed miaraka amin'ny algorithma manan-tsaina, ny rafitra dia mahomby amin'ny famitana ary afaka manivana hazo sy vorona mahomby hampihenana ny fanairana diso.
● Fandidiana tsotra, maritrano misokatra, mifanentana tsara ：Ity rafitra ity dia manana maritrano malalaka ary afaka miditra amin'ny sehatra fiarovana marobe. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fitsarana, seranam-piaramanidina, tanimbary, seranan-tsambo ary sehatra fampiharana lehibe hafa.